Yima Up Pouches Factory | China Yimani ngeengxowa zabavelisi, abaXhasi
Flat Ezantsi Pouches
Iibhegi zangaphantsi zegusset zezona zisetyenziswayo zihlala zisetyenziswa. Iigussets ezisezantsi zifumaneka emazantsi eebhegi eziguqukayo. Zahlulahlulwe zahlulwa zaba lilimi ezantsi, itywina le-K, kunye neegussets ezingqukuva ezisezantsi. I-K-Seal Bottom kunye nePlow Bottom gusset pouches ziguqulwa ukusuka kwiijikelezo ezisezantsi zegusset ukuze ufumane amandla ngakumbi.
Iipakethi ezisezantsi ezithe tyaba yimveliso entsha yokupakisha yokutya, ethandwa ngakumbi nangakumbi. Banamagama amaninzi, anjengengxowa yebhlokhi engezantsi, ingxowa yebhokisi, isingxobo sezitena, iibhegi ezantsi zesikwere, njl.Zinamacala ama-5, ukuphucula isibheno seshelf kunye neepaneli ezintlanu zommandla ongaphezulu onokuprintwa ukubonisa imveliso okanye uphawu lwakho ngokufanelekileyo. Ngaphandle koko, iipokethi zebhokisi zizinzile kwiishelufa kwaye kulula ukuzifumba ngokubonelela ngokulula kubathengisi nakubathengi, okuya kukhulisa ukhuphiswano lweemarike, kwaye kufanelekile kulwakhiwo lwebranti yemveliso kunye nokupapashwa kwegama.
Kulula ukuyivula kwaye kulula ukuyivala, cofa-ukuvala iiziphu zezona zinto zibalaseleyo, ezingabizi mali zinokuphinda zisebenze / zinokuphinda zisebenze kwakhona kwiintlobo ezininzi zeebhegi eziguqukayo, kubandakanya zombini iipakethi zokuma kunye neebhegi ezizizicaba, ezisebenzayo ekuthinteleni ukungcola okanye ukuchitheka. kunye nokugcina ukutsha kwemveliso.
Iipakethi ezi-spout ziyindlela yokupakisha ethandwayo ethandwayo kwimizi-mveliso emininzi, ngakumbi kwiimveliso ezingamanzi kunye nezingamanzi. Uyilo lwezi zikhwama zinee-spouted luyasebenziseka kwaye lusebenza ngakumbi xa kuthelekiswa nolunye ukhetho olunento yokwenza lula yokuhambisa. Iimveliso zesingxobo esinezixhobo esizibonelelayo zisebenzisa ubuchwephesha bokuvelisa kunye nobuchwephesha bokushicilela kwaye sinokugcina ngokukhuselekileyo kwaye sihambise zombini iimveliso ezingamanzi kunye nezomileyo ngaphandle komonakalo. Ubungakanani kunye nefom zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi kunye nemfuno.
Iipakethi ezibunjiweyo zibonakalisa ukhetho olufanelekileyo lweshelufu kwisibheno sebrendi. Zisebenziseka lula kwaye ziluncedo. Sebenzisa itekhnoloji yokuvelisa kunye nokushicilela okumgangatho ophezulu, iipakethi zethu ezimilisiweyo zinokuyilwa nokuba yeyiphi na iiphakeji zemilo imveliso yakho ibalaseleyo kwimibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu.